Iqabane langaphambili elinelungelo lokugcinwa alifuni kusebenza | Law & More
Blog » Iqabane langaphambili elinelungelo lokugcinwa alifuni kusebenza
Iqabane langaphambili elinelungelo lokugcinwa alifuni kusebenza
ENetherlands, isondlo ligalelo lezemali kwiindleko zokuphila zeqabane langaphambili kunye nabo nabaphi na abantwana emva koqhawulo-mtshato. Yimali oyifumanayo okanye ekufuneka uyihlawule ngenyanga. Ukuba awunayo ingeniso eyoneleyo yokuzixhasa, unelungelo lokufumana isondlo. Ukuba unayo ingeniso eyoneleyo yokuzixhasa kodwa iqabane lakho langaphambili alinayo, kuya kufuneka uhlawule isibonelelo. Umgangatho wokuphila ngexesha lomtshato uthathelwa ingqalelo. Ukunikezelwa kwenkxaso yomlingane kusekelwe kwimfuno yeqela elinelungelo kunye namandla emali kwiqela elinyanzelekileyo. Ngokwenza oko, oku kuhlala kungumxholo wengxoxo phakathi kwamaqela. Kungenzeka ukuba iqabane lakho langaphambili libange isondlo xa yena eneneni esebenza ngokwabo. Ungakufumanisa oku kungekho sikweni, kodwa ungenza ntoni kwimeko enjalo?
Umntu obanga inkxaso yomlingane kufuneka abonakalise ukuba akanamali okanye akoneli ngokwaneleyo ukuba angazixhasa kwaye akakwazi ukuvelisa loo ngeniso. Ukuba unelungelo lokuxhaswa ngumlingane, into yokuqala kukuba kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukuzibonelela. Lo msebenzi ubangelwa ngumthetho kwaye ukwabizwa ngokuba luxanduva lwenzame. Kuthetha ukuba iqabane langaphambili elinelungelo lokufumana isondlo kulindeleke ukuba likhangele umsebenzi ngeli xesha lifumana inkxaso-mali.
Uxanduva lokwenza iinzame luxanduva lokumangala kakhulu xa usenza. Iqela elinyanzelekileyo lihlala linoluvo lokuba iqela elinelungelo lingasebenza kwaye lenze ingeniso ngaloo ndlela. Ngokwenza njalo, iqela elinyanzelekileyo lihlala lithatha indawo yokuba ummkeli abe nakho ukufumana imali eyoneleyo yokuzixhasa. Ukuxhasa uluvo lwakhe, iqela elinyanzelekileyo linokungenisa ubungqina, umzekelo, izifundo zezifundo ezilandelwa ngumamkeli kunye nemisebenzi ekhoyo. Ngale ndlela, iqela elinyanzelekileyo lizama ukuyenza icace into yokuba akukho sondlo kuya kufuneka sihlawulwe, okanye ubuncinci kangangoko.
Oku kulandela kumthetho wamatyala ukuba uxanduva lomntu onikwe imali yesondlo ukwenza iinzame zokufumana umsebenzi akufuneki luthathwe lula. Umboleki-mali wolondolozo kufuneka angqine kwaye aqinisekise ukuba wenze iinzame ezaneleyo zokufumana (ngakumbi) amandla omvuzo. Yiyo loo nto umntu oboleke imali yesondlo kuya kufuneka angqine ukuba uswele. Kuthetha ukuthini 'ukubonisa' kunye 'nokwenza ngokwaneleyo' iinzame zivavanywa kwimeko nganye.
Ngamanye amaxesha, umtyali wemali yesondlo akanakugcinwa kolu xanduva lomzamo. Oku kunokuvunyelwana ngako kwisivumelwano soqhawulo mtshato, umzekelo. Unokucinga ngale meko ilandelayo ethe yavela ngokwenza: amaqela ahlukene umtshato kwaye umyeni kufuneka ahlawule iqabane kunye nenkxaso yomntwana. Emva kweminyaka esi-7, ucela inkundla ukuba inciphise isondlo, kuba ucinga ukuba lo mfazi uya kuba nakho ukuzondla ngoku. Kwityala kubonakala ukuba esi sibini sivumelane ngexesha loqhawulo-mtshato ukuba lo mfazi uya kubakhathalela abantwana mihla le. Bobabini abantwana babeneengxaki ezinzima kwaye bafuna ukhathalelo olunzulu. Eli bhinqa lisebenza malunga neeyure ezili-13 ngeveki njengomqeshwa wethutyana. Njengoko wayenamava omsebenzi omncinci, ngokuyinxenye ngenxa yokhathalelo lwabantwana, kwakungekho lula kuye ukufumana umsebenzi osisigxina. Ingeniso yakhe yangoku ke yayingaphantsi kwenqanaba loncedo loluntu. Ngaphantsi kwezi meko, umfazi wayengenakucelwa ukuba azalisekise ngokupheleleyo uxanduva lwakhe lokwenza iinzame nokwandisa umsebenzi wakhe ukuze angaphindi axhomekeke kwinkxaso yomlingane.
Lo mzekelo ungasentla ubonakalisa ukuba kubalulekile kwiqela elinyanzelekileyo ukuba lijonge ukuba umamkeli uyalifezekisa kusini na uxanduva lwakhe lokwenza iinzame zokwenza ingeniso. Ukuba ubungqina bubonisa into echaseneyo okanye xa kungakho nasiphi na isikrokro sokuba isibophelelo sokwenza ingeniso asifezekiswa, kungakuhle ukuba lowo unyanzelweyo aqalise iinkqubo zomthetho ukuze kuvavanywe uxanduva lwesondlo kwakhona. Amagqwetha ethu osapho anamava angakuvuyela ukukwazisa malunga nokuma kwakho kwaye akuncede kule nkqubo.
Ngaba unemibuzo malunga nenkxaso-mali yesondlo okanye unqwenela ukufaka isicelo, utshintshe okanye uphelise isondlo? Emva koko nxibelelana namagqwetha osapho ku Law & More. Amagqwetha ethu abalasele (re) ekubaleni inkxaso yesondlo. Ukongeza, sinokukunceda kwinkqubo yolondolozo olunokwenzeka. Amagqwetha Law & More ziingcali kwicandelo lomthetho wabucala kunye nosapho kwaye ngovuyo baya kukukhokela kule nkqubo, mhlawumbi kunye neqabane lakho.
Post edlulileyo Athini amalungelo akho njengomqeshi?